केपी ओली ले सर्वोच्च को निर्णय नबुझेको बिभिन्न तह हरु
उफ्रिनेहरू उफ्रिन छोड्नुपर्छ, उफार्नेले उफार्न छोड्नुपर्छ : केपी ओली
जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्ने घाम, म कतातिर जाम ...... म आफूलाई कुनै जिल्ला वा प्रदेशमा सीमित राख्दिनँ । जन्म भएकै जिल्लाकै मैले काम सुरु गरेको जिल्लाको मात्रै प्रतिनिधि भन्ने कुरा हुँदैन । म जिविस सभापति होइन । के म वडाको कुरा गरौं, देशको कुरा नगरेर ? जनताको कुरा नगरेर के मेरो साइलो भाइ, माइलो भाइ, कान्छो भाइको कुरा गरौं ? मामा, छोराको कुरा गरौं ? ..........
केपी ओलीले मेची, कोसी, सगरमाथाका पहाडी जिल्लाहरू एक ठाउँ राख्यो भनेर । सप्तरी सिराहा पनि त्यसैमा लगिदिन पर्यो भनेर माग आइराखेको छ । जति राखियो ती राखिएकोमा किन राखियो भन्नेमा कुनै विरोध त छैन ।
...... नेताहरूको विज्ञताले काम नगरेर तल जनताहरू पनि आफू–आफू विज्ञ भएर नै सबैको हातमा रंगीन पेन्सिल कागज देखिन्छ । यसरी काट्नुपर्छ सीमा । अनि
हाम्रा स्थापित संस्थाहरूले विज्ञहरूबाट गर्नुहुँदैन भनेर फैसला ठोकिसके । आदेश ठोकिसके ।
....... म ००८ सालमा जन्मिन्छु भनेर ००७ सालमा प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि संविधानका कुरा गरेका हुन् कि जस्तो त मलाई पनि शंका छ । ...... कहिलेबाट असन्तुष्ट हुनुभयो उहाँहरू ? .... कहाँको सोह्रबुँदे ? उहाँहरू बहुदल आएदेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । राजतन्त्र गएदेखि नि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । कस्तो असन्तुष्ट हो बुझिँदैन । जहिले पाखुरा सुर्केको मात्र देखिन्छ । हिजो माओवादीले उग्रपन्थी नीति र व्यवहार देखाउँदा मैले उहाँहरूको विरोध गरें, आलोचना गरें । उहाँहरू अहिले संविधान बनाउने कुरामा आइसक्नुभयो । म उहाँहरूप्रति खुसी छु । अब अरु किन उफ्रिएका हुन् । यसबाट तपाईंहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुस् भन्न चाहन्छु । ...... १०/१५ दिन लाग्न सक्छ कि ! ... भदौको दोस्रो हप्ताभित्र संविधान जारी गर्छौं ।
केपी ओली ले सर्वोच्च को निर्णय नबुझेको बिभिन्न तह हरु रैछन्। सर्वोच्च ले संविधान तिमीले लेख, नक्शा तिमीले कोर भनेर भनेको होइन। विज्ञ हरु लाई बीचमा नल्याऊ भनेर भनेकै छैन। सीमांकन नामांकन नटुंगिए सम्म संविधान सभा कायम रहन्छ भनेर मात्र भनेको हो। सीमांकन बिज्ञ ले गरोस, नामांकन प्रदेश सभा ले गरोस् -- त्यो सर्वोच्च को टाउको दुखाइ होइन।
मधेशी मोर्चा र मोहन वैद्यको कार्यगत एकता : पहिलो गाँसमै ढुंगा
मोर्चाबाट महन्थ र राजेन्द्र ब्याक !
साउन १८ गते घोषणा भएको कार्यगता एकताप्रति महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तथा सद्भावना पार्टीका नेताहरुले विरोध जनाएका थिए । ..... यस विषयमा तमलोपा र सद्भावना पार्टीका नेताहरु भन्छन्, ‘आजको कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नै भएन ।’
Constituent assembly federalism KP Oli Nepal supreme court of nepal